TV4 oo diiday dacaayada cunsuriyiinta | Somaliska
Telefishinka TV4 ayaa sheegay in ay ka diideen soo bandhigida xayeysiin ololaha doorashada Xisbiga Cunsuriga ee loo yaqaan Sweden Democrats, TV4 ayaa sheegay in sababta ay u diideen dacaayada ay tahay ayadoo xambaarsan nacayb diineed. Xisbiga cunsuriga ayaa doonayay in ay siiyaan TV4 lacag gaareysa 1.5 milyan oo karoon si ay ugu soo bandhigaan xayeysiinta, dacaayada ayaa ah mid soconeysa nus daqiiqo ayadoo muujineysa haweeney waayeel ah oo ku socota gaariga waayeelada oo ay eryanayaan hablo Muslimiin ah oo indha shareer wata iyo caruur. Dacaayada Xisbiga cunsuriga ayaa ku saabsan kordhinta lacagta Benshanka ee ay qaataan dadka waayeelka, ayagoo sheegaya in si ay lacagtaas u kordhiyaan ay joojin doonaan soogalootiga. "Waxaan go'aansanay in aanan soo bandhigin, sharciga Sweden waa ka mamnuuc hadalka ku saabsan naceyb koox gaar ah, dacaayadan waa naceyb ku wajahan diin gaar ah" ayuu yiri Gunnar Gidefeldt oo ah agaasimaha iskaarsiinta ee TV4. Balse Xisbiga cunsuriga ayaa ku doodaya in aysan dacaayadooda ku saabsaneyn naceyb balse ay tahay xaqiiqo. Sharciyaqaano Swedish ah ayaa sheegay in dacaayada Xisbiga aysan jabin sharciga Sweden.
Telefishinka TV4 ayaa sheegay in ay ka diideen soo bandhigida xayeysiin ololaha doorashada Xisbiga Cunsuriga ee loo yaqaan Sweden Democrats, TV4 ayaa sheegay in sababta ay u diideen dacaayada ay tahay ayadoo xambaarsan nacayb diineed.
Xisbiga cunsuriga ayaa doonayay in ay siiyaan TV4 lacag gaareysa 1.5 milyan oo karoon si ay ugu soo bandhigaan xayeysiinta, dacaayada ayaa ah mid soconeysa nus daqiiqo ayadoo muujineysa haweeney waayeel ah oo ku socota gaariga waayeelada oo ay eryanayaan hablo Muslimiin ah oo indha shareer wata iyo caruur.
Dacaayada Xisbiga cunsuriga ayaa ku saabsan kordhinta lacagta Benshanka ee ay qaataan dadka waayeelka, ayagoo sheegaya in si ay lacagtaas u kordhiyaan ay joojin doonaan soogalootiga.
“Waxaan go’aansanay in aanan soo bandhigin, sharciga Sweden waa ka mamnuuc hadalka ku saabsan naceyb koox gaar ah, dacaayadan waa naceyb ku wajahan diin gaar ah” ayuu yiri Gunnar Gidefeldt oo ah agaasimaha iskaarsiinta ee TV4.
Balse Xisbiga cunsuriga ayaa ku doodaya in aysan dacaayadooda ku saabsaneyn naceyb balse ay tahay xaqiiqo.
Sharciyaqaano Swedish ah ayaa sheegay in dacaayada Xisbiga aysan jabin sharciga Sweden.